Puma Smartwatch: smartwatch ee sumadda leh Wear OS | War gadget
IFA 2019 had iyo jeer waxay naga tagtaa alaabada ugu xiisaha badan. Mid ka mid ah alaabooyinka horey loogu soo bandhigay dhacdada tikniyoolajiyadda ee Berlin waa Puma Smartwatch. Nooca caanka ah ee dharka isboortiga ayaa naga tagaya saacaddan casriga ah, taas oo u isticmaasha Wear OS inay tahay nidaamka qalliinka. Waxay calaamad u tahay gelitaanka shirkadda qaybtan suuqyada ah, oo sii kordheysa maanta.
Horumarinta Puma Smartwatch, shirkaddu waxay la shaqaysay Fosil, shirkad khibrad weyn u leh dhanka saacadaha isboortiga. Marka waxaan wajahaynaa qaab ku hanan kara socod wanaagsan qaybtan suuqan.
Hal ku dhig leh "Dhig, isku xir oo orod", waxaa noo cad in aan nahay ka hor saacad loogu talagalay isboortiga. Ikhtiyaar ku habboon isticmaaleyaasha firfircoon, ee sameeya noocyo kala duwan oo isboorti ah oo doonaya inay had iyo jeer gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, marka lagu daro helitaanka howlo badan. Waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar wanaagsan kiiskan. Naqshadeedu sidoo kale waa mid isboorti, laakiin waa mid miyir leh oo leh khadad fudud guud ahaan.
1 Tilmaamaha Puma Smartwatch
Tilmaamaha Puma Smartwatch
Puma Smartwatch ayaa leh shaashad ah AMOLED cabirkeedu yahay 1,2-inch. Waxaa lagu sii daayaa hal cabir oo kiis ah, 44mm kiiskan. In kasta oo aan awoodi doonno inaan kala dooranno saddex midab, kuwaasoo ah kuwa lagu arki karo sawirrada: madow, caddaan iyo jaalle. Marka isticmaale kasta ayaa dooran kara nooca saacaddan u muuqda kan ugu xiisaha badan.
Gudaha A processor Qualcomm Snapdragon Wear 3100 ayaa na sugaya, a classic berrinkii saacadaha. Waxay ku imaaneysaa RAM 512 GB ah sidoo kale waxay leedahay 4 GB oo keyd ah oo gudaha ah, sida ay xaqiijisay shirkadda lafteeda. Batariga smartwatch-kani wuxuu balan qaadayaa inuu na siinayo ismaamul wanaagsan. Sida laga soo xigtay shirkadda, waxay na siineysaa 24 saacadood oo nolosha batteriga ah, in kastoo haddii aan isticmaalno habka keydinta tamarta ee ku dhex jira, aan ka dhigi karno 48 saacadood.
Sida ku sii kordheysa qaybtan suuqan, Puma Smartwatch sidoo kale waxay naga dhigeysaa amar deg deg ah. 50 daqiiqo gudahood waxaan awoodnaa inaanu lacag ka qaadno 80% isku batari ah. Nidaamka qalliinka, sidaan horay u sheegnay, wuxuu adeegsadaa Wear OS, nidaamka hawlgalka ee Google. Tani waa wax ku siinaya adiga helitaanka astaamaha sida Google Assistant ama isku xirnaanta buuxda ee Google Fit, tusaale ahaan.
Puma Smartwatch wuxuu leeyahay dareemayaal caadi ah iyo shaqooyinka saacadda isboortiga. Waxay leedahay dareemayaal garaaca wadnaha isku dhafan, Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku quusinno illaa 3ATM biyo hoostooda, taas oo noo oggolaaneysa inaan u isticmaalno dabaasha. Waxa kale oo ay leedahay GPS, si ay si fiican u cabirto howlaha isboorti ee aan qabanno. Waxa kale oo ku jira altimitaar oo waxay leedahay aaladda NFC, taas oo noo oggolaan doonta inaan ka bixinno lacagaha mobilka saacadda lafteeda. Waxaan sidoo kale heli doonaa adeegyo iyo codsiyo sida Spotify, ogeysiisyo, cimilo iyo waxyaabo kale oo badan. Hawlaha caadiga ah ee macno ahaan xilligan casriga ah ee suuqa ku jira.
Shirkadda ayaa xaqiijisay in saacadda si rasmi ah ayaa loo bilaabi doonaa Nofeembar ee isla sanadkaan suuqa. Kuwa xiiseynaya inay iibsadaan waxay ku awoodaan inay ku sameeyaan bogga rasmiga ah ee Puma. In kasta oo sidoo kale la bilaabayo dukaamo xul ah, taas oo gacan ka geysan doonta fududaynta iibsashada saacaddan ama dhab ahaan u arko ka hor intaadan iibsan.
Marka laga hadlayo qiimaheeda, Puma Smartwatch-kan ayaa ku imaan doona qiimo dhan 279 euro dukaamada, horeyba waxaa u xaqiijisay Puma lafteeda. Shaki la'aan, waa saacad ka tagaysa dareen wanaagsan marka loo eego waxqabadka, in kasta oo qaybtani horeyba u leedahay moodallo qaarkood oo gaar ahaan taagan, kuwaas oo horeyba boos uga helay suuqan. Marka waa la arki doonaa haddii ay ka guuleysaneyso macaamiisha iyo in kale marka ay bilaabeyso bisha Nofeembar. Maxaad u maleyneysaa saacaddan ka timid astaanta?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Puma Smartwatch: Smartwatch ee sumadda leh Wear OS
Facebook ayaa khalkhal gelisay markii ugu horreysay: waxaa la helay 419 milyan oo nambar taleefanno ah